Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 11:50 PM0comments
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 8:20 PM0comments
ကျနော်ဟာ မိမွေးတိုင်း၊ဖမွေးတိုင်းပါပဲ။ ။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 10:44 PM0comments
ကာတာရောက်မြန်မာများအနေဖြင့် မလွဲမသွေကြုံရမည့် အခက်အခဲ တချို့ရှိသည်။
ကန္တာရနိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် အပူအအေးပြင်းထန်သည်။ရေသည် နွေအခါတွင် အရေပြားလောင်သည်အထိ ပူပြင်းပြီး၊ ဆောင်းတွင် ရေမခဲသည့်တိုင် ကျင်စက်နေအောင်အေးသည်။ နွေ(၈)လ၊ ဆောင်း(၄)လ ပျမ်းမျှရှိသည်။
ကာတာရောက်မြန်မာများအနေဖြင့် ငွေလွှဲရာတွင် အခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ တရားဝင်ငွေလွှဲအေဂျင်စီများမရှိပါ။ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ အနည်းအကျဉ်းရှိသော်လည်း ငွေလွှဲနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့် အိမ်ပို့ခတောင်းခံခြင်း (မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း လမ်းစားရိတ်တောင်းပြန်ပါသည်) တို့အပြင် လိမ်လည်မှုများလည်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ငွေလွှဲရာတွင်လည်း ရုံးခန်း/ ဆိုင်ခန်းမရှိပဲ သောကြာနေ့တိုင်းတွင် လူစုံလေ့ရှိသော (ငွေလွှဲလုပ်သူများအခေါ် စုရပ်ဟုဆိုသော) ကားဝင်းအနီး မြက်ခင်းပြင်တနေရာပေါ်တွင် ငွေလွှဲရခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာအများစုရှိသောနေရာများ၊ ဟိုတယ်များကိုတော့ ငွေလွှဲလုပ်သူများက ပိုက်ဆံလာကောက်လေ့ရှိသည်။
ကာတာနိုင်ငံတွင် မြန်မာသံရုံးမရှိသဖြင့် သက်တမ်းတိုးရာတွင် အခက်အခဲများရှိသည်။ လူရည်လည်သော/ အဆက်အသွယ်ကောင်းသော/ အတွေ့အကြုံရှိသော/ အချိန်ပေးနိုင်သော သူတချို့က အီဂျစ်/ကူဝိတ်နိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ဆက်သွယ်ကာ စာအုပ်နှင့်ငွေပို့ကာ သက်တမ်းတိုးကြသည်။ တချို့အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ကာ သက်တမ်းတိုးကြသည်။ အချိန်မပေးနိုင်သော/ ခွင့်အခက်အခဲရှိသောသူများအနေဖြင့် ပွဲစားများမှတဆင့် သက်တမ်းတိုးရသည်။ ပွဲစားမှတဆင့်သက်တမ်းတိုးရာတွင် အချိန်ကြာမြင့်ခြင်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျပိုများခြင်းနှင့်အတူ လိမ်လည်မှုများလည်း ခံရတတ်သည်။ စာအုပ်လည်းပေး၊ ပိုက်ဆံလည်းပေး၍ ရင်တထိတ်ထိတ်ဖြင့် စောင့်မျှော်ရသည်။ ကံအကြောင်းမလှ၍ လိမ်ခံထိပါက အဖြေအရှင်းမတတ်လျှင် မိမိပင် ထောင်နန်းစံရဦးမည်။
အာရပ်ကမ္ဘာမို့ အာရဗီစကားကိုသာ အဓိကထားသုံးစွဲကြသည်။ အင်္ဂလိပ်လို ကျယ်ပြန့်စွာသုံးနိုင်သော်လည်း အသံထွက်မတူခြင်း၊ အသုံးအနှုန်းကွဲခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရမည်။
ကာတာနိုင်ငံတွင် မြန်မာအစားအစာ၊ မြန်မာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ မရပါ။ ခန့်မှန်းခြေအရ ကာတာနိုင်ငံတွင် မြန်မာလူမျိုး ၃၀၀ ဝန်းကျင်ခန့်ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာအချင်းချင်း ဆုံတွေ့နိုင်ရန်မလွယ်ကူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခ ဈေးကြီးသည်။ လေယာဉ်ခ ဈေးကြီးသည်။ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး (ဈေးကြီးပြီး အရည်အသွေးမကောင်းသော်လည်း) လွယ်ကူစွာမရနိုင်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။တနှစ်ကျော်ဖြတ်သန်းလာသော အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ ရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စနစ်တကျလေ့လာ၊ စုံစမ်းထားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ယေဘူယျသဘောသာ ဖြစ်ပါသည်။လူတယောက်နှင့် အခြားလူတယောက် ဖြတ်သန်းပုံ၊ လေ့လာပုံ၊ အမြင်များ မတူညီနိုင်ပါ။ မည်သူတဦးတယောက်ကိုမျှ ထိခိုက်အောင်မရည်ရွယ်ပါ။ အတွေ့အကြုံ ဝေမျှခြင်းသာဖြစ်သည်။ ။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 11:32 PM0comments
Labels: မျှဝေခြင်း, အတွေ့အကြုံ
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 3:46 AM0comments
အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ...မိုးရာသီထဲက မိုးရွာတဲ့ တနင်္လာနေ့...(ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်)
အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ...မိုးရာသီထဲက မိုးမရွာတဲ့ တနင်္လာနေ့...(ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်)
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 5:37 PM 1 comments
ဒါပေမယ့် သီတာရယ်...။ ။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 10:53 PM0comments
Labels: ကဗျာ, ဝတ္ထုတို
တ ဖြည်း ဖြည်း နဲ့ လုံး...ပါး...ပါး...ခဲ့။ ။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 8:03 PM0comments
ပြောလက်စ စကားကိုရပ်ပြီး အမှတ်မဲ့ဆေးလိပ်မီးညှိတယ်၊ လူတွေ ကားပေါ်အလုအယက်တက်၊ ကားတွေ လမ်းပေါ်အလုအယက်မောင်း၊ သူ မျက်စောင်းလှလှလေးထိုးတယ်၊ 'ဒါပါနဲ့ဆို ၁၀လိပ်ရှိနေပြီနော်'တဲ့၊ 'တမနက်ခင်းမှမကျိုးသေးဘူး'၊ သူတောင်းစားတွေ ပိုပိုများလာတယ်၊ စကတ်တွေ ပိုပိုတိုပြီး၊ အင်္ကျီလည်တွေ ပိုပိုဟိုက်လာတာ ကမ္ဘာကြီး ပိုပိုပူနွေးလာလို့ဖြစ်မယ်၊ ခုတလော ပူရှာလို့နဲ့တူပါရဲ့၊ celebrities တော်တော်များများလည်း အဝတ်မကပ်တော့တာ အင်တာနက်ထဲမှာ၊ လက္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ၊ ဘုံဆိုင်မှာ၊ ဈေးလည်မှာ၊ ဘောလုံးပွဲမှာ။
စီးချင်တဲ့ကားက ရောက်မလာဘူး၊ ရောက်လာတဲ့ကားက တက်မရဘူး၊ ရောင်းရမရောင်းရတော့မသိဘူး၊ ဂျာနယ်တော်တော်များများတော့ လန်းနေလေရဲ့၊ လမ်းဘေးမှာ၊ ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ၊ တိုက်လှေကားမှာ၊ မီးပွိုင့်မှာ၊ ယူချင်ယူ မယူချင်နေ အတင်းကမ်းတဲ့ လက်ကမ်းကြော်ငြာစာရွက်များ၊ ပန်းသည်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ကွမ်းယာ၊ billboards၊ အပေါ်လမ်းအောက်လမ်းခေါ်သံများ၊ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာရယ်မောတတ်သော ဆယ်ကျော်သက်များ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများ၊ အများပြည်သူသုံး တယ်လီဖုန်း၊ ဘုန်းကြီး၊ မယ်သီလရှင်၊ ဗမာ၊ တရုတ်၊ ကုလား၊ ပြည်ထောင်စုဖွါး တိုင်းရင်းသားများ၊ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူများ၊ လမ်းပေါ်မှ အလေအလွင့်များ၊ ဖိနပ်လှလှလေးများ၊ ခြေထောက်လှလှလေးများ၊ ကျောပိုးအိပ်လှလှလေးများ၊ ရောင်စုံထီးများ၊ ဦးထုပ်များ၊ နေကာမျက်မှန်အောက်မှ မျက်လုံးများ၊ ရေသန့်ဘူးများ၊ ဆေးလိပ်တိုများ၊ ကျွတ်ကျွတ်အိပ်များ၊ ကွမ်းသွေးများ။
နောက်တခါမီးညှိလျှင် ၁၁ခါမြောက် သူမျက်စောင်းထိုးလိမ့်ဦးမည်၊ မှတ်တိုင်မှာ ကားတားလျှင် မည်သည့်အငှားယာဉ်မှ ရပ်မပေးချင်ကြပါ။ မရည်ရွယ်ပဲ တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီး သက်ပြင်းကိုယ်စီ ချမိခဲ့ကြသည်။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 12:02 AM0comments
ငါ့မှာ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြစရာဆိုလို့ ဒါဏ်ရာတွေပဲရှိတယ်။
ငါက ဘဝကို မှားခဲ့တာ။ ။
Posted by ဉာဏ်လင်းထူး at 12:51 AM 1 comments
This blog is written by Myanmar Unicode.
ကောင်းတာတွေဆို လူတွေက အမှုမဲ့၊အမှတ်မဲ့။
မကောင်းတာတွေဆိုရင်တော့ အမှတ်ထင်ထင်ကို ရှိတတ်ကြလွန်းတယ်။
written by zawgyi font
ကြိုက်​ရင်​ကူး​သွား​ပါ။နာမည်​လေး​တော့ မ​မေ့​ပါ​နဲ့။. Powered by Blogger.